Kitchenware nezinsiza usujwayelene kithi, futhi iyingxenye ebalulekile yokuphila kwabo kwansuku zonke. Kodwa muva nje okukhethekile ezitolo ayikwazanga ukuziqhayisa anhlobonhlobo futhi kungaba kuphela ukunikela version elula izitsha. Ngokungangabazeki, ngakwazi ukuhlangana kuphela izidingo ezingokwenyama zalabo indoda, kodwa injabulo yobuhle Akawukhululi. Okwamanje, ikhasimende Ungakhetha noma yiliphi ibanga izinto ukupheka ngokuvumelana zabo okuthandwa siqu, ikhono zezimali nemicabango. Ngenxa yalesi sigaba imikhiqizo zihlanganisa inani elikhulu lezinto. Lokhu ezihlukahlukene okuzikhulula, amakhanzi, namafosholo, iziqukathi nezimbiza yokusanhlamvu nokunye okuningi. Ngakho-ke, ukukhetha Cookware ngisho simple.
Iza phambi aluminium, koqweqwe lwawo futhi-chrome. Okokuqala ezingadumile kakhulu ngoba ezindaweni zawo phakathi ukusebenza i-nitrous ifilimu okuyinto okuwumphumela kunethonya elibi emzimbeni womuntu. Enamelled ekhishini izitsha babe izakhiwo ezinhle kakhulu, kodwa uthambekele lokhu Browning surface futhi igawula. Ezikhanga kakhulu ukhetho odlule. -Chrome-kuhlinzwa izinto Ukugunda futhi is njalo ngcono.
Lapha isinqumo zisetshenziswe lula. Kulabo esivuna cuisine kuphela Russian, okuthandayo kufanele inikwe izitsha ezenziwe cast iron. Zonke ezinye pan efanelekayo ezenziwe ngensimbi. On ubuso bayo kumele camera nge non stick enamathela.
Uma ladles ahlukahlukene, spatulas, skimmers zisesimweni abavelele noma kombhede ukulungele ngokukhethekile, bese kukhethwa kubo kungcono ukuba banake hhayi kuphela ukusebenza kodwa futhi ukubukeka kwangaphandle. Ngokuvamile, la izesekeli ikhishi zenziwa ngokhuni, metal noma plastic. Indaba yokuqala kuba okwesikhashana futhi ihlanzekile ingasaphathwa. Ngo imikhiqizo metal, futhi, kukhona nemibi, ebaluleke kunayoyonke sazo ukulimala kwempahla luthi alufane nonstick. It uhlala plastic. Ikhishi izinto ezenzelwe kulokhu kwaziswa, ngempela eziqinile, ukukhanya, musa bhala Cookware futhi muhle.
Lapho ekhetha Cookware kuyadingeka ukuba acabangele isitayela igumbi. Ngakho, zobumba kanye ingilazi ngokuphelele umphelelisi isitayela zakudala. tableware bobumba, lapho ukuqina kanye lula, kuyinto ekahle ikhishi zwe. Kuyinto lilula acabangele, lapho igumbi entsha, kodwa ngokuhamba kwesikhathi, izitsha kanye izesekeli lukhula. Lo mbuzo ubuzwa: indlela ukuhlobisa isikhala? Impendulo - ukusebenzisa ukubiya. Lo mklamo siqukethe tube lensimbi sebuningini izingwegwe, okuyinto kalula bamba ezihlukahlukene izitsha. It unamathele emaphethelweni etafuleni noma agibele amahhashi phakathi amakhabethe phansi. Ayikho abanikazi kancane ezidingekile amathawula, napkins, Cutlery. Into esemqoka ukuthi zonke izinto zenzelwe e besenze nesitayela esifanako, futhi ngokuvumelanayo umphelelisi nomunye.
Inks ngoba umthombo ipeni, onsomi nezinye imibala
Siyazi ukuthi bangaki izinyanga nezwe, izingane ziqala ukukhasa
Umfula we-Turboslim: ukubuyekezwa
Imidlalo Ye-Inthanethi Nokuhweba Kwangempela
Ingabe ngiphuzela cocoa ngesikhathi sokukhulelwa: udokotela iseluleko
Uchungechunge oluthi "Ukubhula ngekhandlela." Abadlali of the ifilimu "Ukubhula ngekhandlela"
Inkohlakalo yesithombe kuwumsebenzi oyingozi